Madaxweynaha cusub ee KGS oo maanta xilka kala wareegay sii hayihii xilkaas – Kalfadhi
Madaxweynaha cusub ee KGS oo maanta xilka kala wareegay sii hayihii xilkaas
December 26, 2018 December 27, 2018 Kalfadhi
Madaxweynaha Koofur Galbeed, Cabdicasiis Lafta Gareen, ayaa maanta xilkii kala wareegay Kusimaha Xilkaas, oo ah Guddoomiyaha Baarlamaanka Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS), Cabdulqaadir Shariif Sheekhunaa.
Xil la wareegiddiis oo ka dhacday Baydhabo kadib, waxa uu Lafta Gareen ku celiyey inuu caleema-saarkiisa kadib qorsheystay wax ka qabashada ammaanka deegaannada KGS, markaas kadibna uu ka shaqeyn doono hormarinta arrimaha bulshada, dhaqaalaha, siyaasadda iyo caddaaladda.
Madaxweyne Lafta Gareen waxa uu sheegay inuu doonayo in, si uu tilaabo ugu qaado gacan ku qabashada amniga gobolka, uu gogol dib-u-hishiisiineed u dhigi doono Reer KGS oo dhan, “si leysugu uur furo” buu yiri “dadka Koofur Galbeed, gaar ahaan kuwa qaba tabashada”.
“cid kasta oo wax tabaneysa oo Reer Koofur Galbeed ah, si kasta oo ay ku timaaday, ayaan rabnaa inaan ka shaqeyno, gogol nabadeedna loo dhigo” ayuu yiri Lafta Gareen. “Waxaan si degdeg ah u bilaabeynaa inaan isku furno waddooyinka isku xira Xamar ilaa Baraawe, Xamar ilaa Baydhabo” ayuu Madaxweynaha KGS sii raaciyey hadalkiisa.
Afhayeenka Baarlamaanka KGS, Cabdulqaadir Shariif Sheekhunaa, ayaa markii uu xilka wareejiyey kadib hadal kooban oo uu jeediyey ku sheegay iney muhiim tahay in lala shaqeeyo Madaxweynaha cusub iyo xukumadda uu soo dhisi doono. “Anaga ka Baarlamaan ahaan, Madaxweyne waxaan diyaar u nahay inaan wixii waajibaad ah ee uu dastuurka iyo sharcigu qabo kugula shaqeyno” ayuu yiri Sheekhunaa.
Guddoomiyaha Golaha Shacabku ma kala diri karaa Guddoonka Guddiyada Golaha?
Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka oo Guddoon cusub doortay